I-Ksitigarbha - i-Bodhisattva ye-Hell Realm
Unqulo & Umoya Imvelaphi kunye nophuhliso
I-Bodhisattva yeSithili seGrike
I-Ksitigarbha yi- bodhisattva engaphetheyo ye- Mahayana Buddhism . E-China u-Dayuan Dizang Pusa (okanye uTi Tsang P'usa), e-Tibet yena u-Sa-E Nyingpo kunye naseJapan yena nguJizo . Ngomnye wezona ziqhenqele kakhulu kwi-iconic bodhisattvas, ngokukodwa kwimpuma ye-Asia, apho edlalwa khona ukukhokela nokukhusela abantwana abaswelekileyo.
I-Ksitigarbha ngokuyinhloko iyaziwa ngokuba yi-bodhisattva yesimo esihogweni, nangona ehamba kuyo yonke i- Realms Six kunye nesikhokelo kunye nomgcini wezo zinto phakathi kokuzalwa kwakhona.
Nangona i-Ksitigarbha ibonakala ivela ekuqaleni kwe-Mahayana Buddhism e-Indiya, akukho zimelo ezikhoyo kuye ukususela ngelo xesha. Ukuthandwa kwakhe kwanda eChina, nangona kunjalo, ngokuqala ngekhulu le-5.
Iimbali zeBuddhist zithi ngethuba leBuddha phambi koShayamamuni Buddha kwakukho intombazana encinci ye-Brahmin caste eyafa umama. Umama wayedla ngokunyundela imfundiso kaBuddha, kwaye intombazana leyo yayiyesaba ukuba unina wayeza kuphinda azalwe esihogweni. Le ntombazana yayisebenza nzima, yenza izenzo zobubele ukuze zilungele unina.
Ngokutsho kweSutra kwiZifungo zokuQala kunye noFikelelo lweMerits of Ksitigrabha Bodhisatta, ekugqibeleni, ukumkani weidemon-moya wabonakala kwintombazana waza wamthatha waya esihogweni ukuze abone unina. Kwamanye amabali, kwakunguBuddha owamfumene. Nangona kunjalo, wathatyathwa esiya esihogweni, apho isihogo sasixelele ukuba izenzo zokuhlonela uThixo zazikhululile unina, owayesebuye wazalwa ngokutsha ngendlela ehle kakhulu.
Kodwa intombazana yayiye yaxhamla ezinye izinto ezingenakubalwa ekuthuthukisweni kwisidima esihogweni, waza wathembisa ukubazokhulula bonke. "Ukuba andiyi esihogweni ukunceda abantu abahluphekayo apho, ngubani omnye oya kuhamba?" uthe. "Andiyi kuba nguBuddha ade i-hells ingenanto. Ngaphandle kokuba zonke izidalwa zigcinwe, ngaba ndingena eNirvana ."
Ngenxa yesi sifungo, i-Ksitigarbha idibene neendawo zokuhlala esihogweni, kodwa injongo yakhe kukukhupha zonke iindawo.
Ngokukodwa kwimpuma ye-Asia, i-Ksitigarbha isoloko iboniswa njengomonki olula. Unentloko yokugcoba kunye neengubo zeeonki, kunye neenyawo zakhe ezingabonakaliyo zibonakala, zibonisa ukuba uhamba apho uya khona. Unesigxina esifakazela umnqweno esandleni sakhe sokunene, kwaye isandla sakhe sokunene usibamba abasebenzi abanezindandatho ezintandathu ezixhomekeke phezulu. Amathanga ayisithandathu amele ukuphatha kwakhe iiNqobo zeMithandathu, okanye ngokwemithombo embalwa, ukulawula kwakhe ukuPhelelwa kweMithandathu . Unokuthi ujikelezwe ngamalangatye esi sihogo.
NgaseTshayina ngamanye amaxesha ufanekisela izambatho ezintle kwaye ehleli kwisihlalo sobukhosi se lotus. Unxibe "iqabunga ezintlanu" okanye isithsaba sesihlanu sigaba, kwaye kumacandelo amahlanu imifanekiso yeZihlanu zeDhyani Buddha . Uhlala esithwala i-jewel ethengisayo kunye nabasebenzi abaneemarinxi ezintandathu. Ubuncinane unyawo olungabhaliyo luya kubonakala lubonakala.
E-China, i-Bodhisattva ngamanye amaxesha ihamba kunye nenja. Oku kubhekisela kumbono owamfumana ukuba unina uzalwe kwiindawo zezilwanyana njengenja, eyayiyithatha i-Bodhisattva.
Izenzo zokuzinikela kwi-Ksitigarbha zithatha iindidi ezininzi.
Ingaba yinto ebonakalayo eYapan, apho imifanekiso yamatye e-Jizo, ehlala ngamaqela, ehamba ngeendlela kunye namangcwaba. La maxesha amaninzi amiselwa egameni lomntwana oswelekileyo okanye okhulelweyo okanye umntwana osweleyo kunye nabantwana abafayo. Iziqashiso zidla ngokugqoka iingubo zebhantshi okanye izambatho zabantwana. EJapan, i-Bodhisattva nayo ikhusela abahambi, oomama abalindeleyo kunye nabomlilo.
Kuyo yonke i-Asia kukho inani leemantras ezililiweyo ukubiza iKsitigarbha, ngokuqhelekileyo ukuphepha ingozi. Ezinye zide zide, kodwa nantsi imantra emfutshane efumaneka kwiBibdhism yaseBibetan etshabalalisa izithintelo zokuziqhelanisa:
Om ah Kshiti Garbha thaleng hum.
I-Ksitigarbha mantras iphinde ihlabelelwe ngabantu abaneengxaki ezinkulu zempilo kunye nezezimali.
Ziziphi iimfundiso zobuBuddha ezibhekisela nguSunyata, okanye u-Emptiness?
Isenzo esifanelekileyo kunye neNqwelongo yesibhozo
Ingcamango yeZibhalo zeBuddhist
Eight Dharmapalas: Abakhuseli beBuddhism
I dolophu encinci: i-Quography ye Country Music Quartet
I-Stencils yamahhala ye-Easter Decor and Crafts
Iimpawu zoMculo zokuHlola
I-Middlebury College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Izilwanyana zifakwe kwiTye
Iimpawu ze-Amino Acids kunye nomsebenzi wazo kwimpilo efanelekileyo
9 Iingcamango Ngokufunda IsiTaliyane
I-Chryslers Classic 340 I-Block Small V8
Iincwadi eziphezulu ze-Elvis Presley
Ukubizwa ngegama - I-Hard and Soft C ne-G Izandi
Iincwadi eziphezulu malunga neengelosi kunye nezikhokelo zomoya
I-Celtic Punk Bands
Siye Sifihlakele-15 I-Great Beatle Covers
Biography kaEdmund Cartwright
UHenry V waseNgilani
Iingcebiso ezili-10 ze-SAT Essay
Indlela yokubuyisela kwakhona iMeyili yakho eKhanada
I-Biography ye-Erving Goffman
Ifom ye-British Open Playoff Format
Iimpawu zokulumkisa kwiCopvens ekhangeleyo
Admissions yeYunivesithi yaseWinoming
I-Marshall University Admissions
I-Top 10 Eyona Ninzi Ethembisa Abaculi abatsha be-Pop Pop ngo-2014
Ngaba 'i-Sans Que' izisa iSaxus? Ukuba kunjalo, sebenzisa i-Subjunctive